चितवनमा विकास बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च « Lokpath
२०७७, ९ माघ शुक्रवार १७:३९
प्रकाशित मिति : २०७७, ९ माघ शुक्रवार १७:३९
चितवन । जिल्लामा विकास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेट अपेक्षाकृत रुपमा खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकासका लागि आएको बजेटको २१ दशमलब ५२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।
जिल्लाको विकासका लागि संघीय सरकारले पठाएको ५ अर्ब ४० करोड २२ लाख ७७ हजार मध्ये ६ महिनामा १ अर्ब १६ करोड २८ लाख ७१ हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र शर्मा भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट बिनियोजित बजेट मध्ये विकास निर्माणका लागि निकासा भएको रकमको २० दशमलब ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले विकासका लागि बिनियोजन गरेको बजेट १ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख १६ हजार मध्ये ३० करोड ५९ लाख २७ हजार मात्र खर्च भएको हो । कोरोना कहरका कारण विकास निर्माणमा केही ढिलाई भएको उनले बताए । अहिलेको समय बोलपत्र आव्हान गर्ने र सम्झौता गर्ने समय भएकाले पनि पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताइएको छ ।
कार्यालयका अनुसार जिल्लाबाट संघीय सरकारका लागि ७ अर्ब ८६ करोड ३७ लाख ९६ हजार राजश्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारका लागि व४९ करोड ९३ लाख २६ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
नेपालको जीडीपी आकार १० वर्षमा १४.७ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार १० वर्षमा
के हो म्यादी जीवन बीमा ? यस्ता छन् यसका फाइदा
काठमाडौ – विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले गर्ने जीवन बीमा नै म्यादी जीवन
घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (बिहीवार) सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ । आज
दोभान बजारको आगलागीले करिब ४० करोडको क्षति
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भएको आगलागीका कारण करिब ४० करोड बराबरको क्षति
कैलालीमा व्यापारी हत्याको योजनाकार सार्वजनिक, साबिती बयानमा के भनिन् ?
प्र्यांक भिडियो बनाउन चक्कु लिएर दौडिँदै थिए यूट्युबर, आत्मरक्षाका लागि…
banner, बैंक/वित्त, समाचार
डेपुटी गभर्नरका लागि चारजना सिफारिस : कसले मार्ला बाजी ?
शेषमतीको सहकारीबाट १ लाख ३७ हजार चोरी
गाउँपालिकाले गर्‍यो एकैपटक ३४ शिक्षकको सरुवा